Nahin ဆိုတဲ့ ဘဂ်လားဒေ့ရှ်က နားမကြားတဲ့ ဂိမ်း Streamer ကို ဘယ်သူမှရပ်တန့်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး | Codashop Blog MM
Home Games Nahin ဆိုတဲ့ ...
Nahin ဆိုတဲ့ ဘဂ်လားဒေ့ရှ်က နားမကြားတဲ့ ဂိမ်း Streamer ကို ဘယ်သူမှရပ်တန့်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင်နေထိုင်သော Nahin Siraz ဟာ ပုံမှန်ဆယ်ကျော်သက် တစ်ယောက်လိုပဲ ဘောလုံးကစားတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်တတ်ပြီးတော့ ဟာသတွေကိုလည်းနှစ်ခြိုက်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာတွေတင်မဟုတ်ပဲ အွန်လိုင်းဂိမ်းနဲ့ ဂိမ်းများလွှင့်ရတာတွေလည်း ဝါသနာပါကြောင်းသိရပါတယ်။ Nahinကနားမကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသူ့ရဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့ စကေးတွေနဲ့ Stream လုပ်တာတွေက တစ်ခြားသူများနဲ့မတူပဲကွဲပြားစေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့ အမိုက်စားစကေးတွေကြောင့် နားမကြားတဲ့သူက ဂိမ်းမကစားနိုင်လောက်ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကို လုံးဝပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
သူ့ရဲ့စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်း၊ အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းတွေနဲ့ သူဟာ Battle Royale ဂိမ်းတွေထဲမှာ အနိုင်ရရန်အတွက်ဂိမ်းအတွင်းမည်သို့ဆက်သွယ်နေပုံကိုပိုမိုလေ့လာကြရအောင်။
Nahin ဟာ Grand Theft Auto: Vice City ကစားခြင်းဖြင့်သူ၏ဗီဒီယိုဂိမ်းခရီးကိုစတင်ခဲ့ပြီး GTA ထဲက Tommy Vercetti အဖွဲ့ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ သူက အခုဆိုရင် PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty: Warzone နှင့် Grand Theft Auto V. ကဲ့သို့သောသေနတ်သမားဂိမ်းများကိုလည်းကစားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပထမဆုံး Stream ထုတ်လွှင့်မှုကိုသူဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သူ့ YouTube channel ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက GTA V နဲ့စတင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Subscriber အယောက် (၂၀) ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲ သူ့ရဲ့ live stream ကို ကြည့်ရှုသူတွေကို သိပ်မရှိတဲ့အခါ Nahin ကသူ့ Channel ကိုဖျက်ပစ်ပြီး လေ့လာမှုများကိုပဲ အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။
သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက် Nahin ဟာ Stream ထပ်ပြီးလုပ်ပါသေးတယ်။ ပြီးခဲ့သောဩဂုတ်လက Nahinဟာ Nahin Gaming စာမျက်နှာကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဤတစ်ကြိမ်မှာတော့ ကြည့်ရှုသူအနည်းငယ်သာရှိတယ် ဆိုတဲ့အတွေးကို သူသိပ်အလေးမပေးတော့ပါဘူး။ သူရဲ့ မိခင် နဲ့ သူငယ်ချင်းများရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးကြပြီးတော့ Follower အရေအတွက်ကိုမကြည့်ဘဲ Stream ကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်တစ်လအကြာမှာတော့သူ့ follower က (၅၀) အထိတိုးလာပါတယ်။ ထို့နောက် Nahin က သူ့ရဲ့ Content တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဂိမ်းလောကရဲ့နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Arpon Plays YT နဲ့ Apollo Gaming တို့ကို ဝေမျှ ခဲ့တယ်။ ထို Streamers နှစ်ခုလုံးသည် Nahin ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကို လေးစားပြီး သူ့ရဲ့ လက်ဟန်ပြဘာသာစကားဗီဒီယိုကို ဝေငှခဲ့ကြပြီးနောက် သူတို့ရဲ့ Followersများအား Nahin ကို အားပေးဖို့အတွက် တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ထို့နောက်တွင်, Nahin ရဲ့ followers များ 50 မှ 10000 သို့ အလျင်အမြန်ရရှိ သွားပါတယ်။ ယနေ့အထိ Nahin Gaming သည် 30K followers နှင့်နီးကပ်နေပြီးခိုင်မာနေဆဲဖြစ်နေပါတယ်။
Nahin ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ သို့သော်သူ့ရဲ့ PUBG ကစားခြင်း များကိုသင်ကြည့်ပါကသူ့ရဲ့ အသင်းဖော်များနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်နေခြင်းကိုသင်တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ နားမကြားသောသူတစ်ယောက်အဖြစ်မွေးဖွားလာသော Nahin ဟာ ရန်သူရဲ့အသံနဲ့ပတ်သက်သောအခြား ရှုထောင့်များကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဂိမ်းတွင်းမှအသံများကို အားကိုးလို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့် Nahin ကသူရဲ့ Teammate တွေထံ စာပို့ဖို့နဲ့ Live ကြည့်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် Notepad ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂိမ်းအတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အမြင်အာရုံကို အဓိကအသုံးပြုရတာက လွယ်ကူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
Nahin usesanotepad to write messages to his allies quickly
ဤနည်းကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ Nahin ကမတူညီသော Window tabs တွေကိုအသုံးပြုပြီး ဂိမ်းကစားတာနဲ့ စာရေးပြီးဆက်သွယ်တာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ voiceover နဲ့ဆက်သွယ်တာဟာစကားပြောနိုင်သော gamers များအတွက်အဆင်ပြေပေမယ့် မှတ်စုစာအုပ်တွင်ရေးခြင်း က Nahin အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။
“အာရှ၏နံပါတ် ၁ နားမကြားသော ဂိမ်းထုတ်လွှင့်သူ”
Nahin ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာက Bio မှာ “Asia’s #1 Deaf Streamer” လို့ရေးထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
လူတွေကသူ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာသူ့ဇီဝအကြောင်းရေးထားတဲ့ “အာရှရဲ့နံပါတ် ၁ နားမကြားတဲ့ရတဲ့ ဂိမ်းထုတ်လွှင့်သူ “ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသတိထားမိမှာပါ။ သူကမွေးလာကတည်းက နားမကြားတဲ့သူဖြစ်ပြီး အာရှမှာ နားမကြားတဲ့ Streamer တွေဘယ်သူရှိလဲလို့ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်သူမှမရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထို့နောက်မှာတော့သူကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ နားမကြားသူ Fortnite ကစားသမား တစ်ယောက်ဖြစ်သော FaZe Ewok အကြောင်းကိုလည်းကြားသိခဲ့ရတယ်။ ထိုသူကို အားကျပြီးတော့ Nahin ကလည်း အာရှမှာ ပထမဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Nahin တစ်ယောက်ဟာအနာဂတ်မှာ Apollo Gaming နှင့် Arpon Plays YT တို့ နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့ မျှော် လင့်နေပါတယ်။
Streamer ဖြစ်ချင်တဲ့ နားမကြားသူများအတွက် Tips
Nahin ရဲ့ဖခင်ကတော့ သူ့သား ဘယ်လိုခက်ခက်ခဲခဲစတင်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Nahin ကသူ့စာသင်ခန်းထဲမှာ အဆင့်ကောင်းပါတယ်။ သူအခု Streaming လုပ်ဖို့သုံးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာကို အစိုးရက မသန်စွမ်းသူတွေအတွက်ကျင်းပတဲ့ ပန်းချီပြိုင်ပွဲကနေရတဲ့ ဆုငွေနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့လိုမျိုး Streaming လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ နားမကြားတဲ့ကစားသမားနဲ့ သာမှန်ကစားသများအကြား ရှိတတ်တဲ့ အတားအဆီးတွေကို ကျော်လွှားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Follower များချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများများလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
မသန်မစွမ်းမှုဆိုတဲ့အရာကြောင့် သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ Chicken Dinner(ဂိမ်းတွင်းအနိုင်ရရှိခြင်း) ကိုလက်မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့!
Previous articleကျဥ်ဆန်ကုန် သွားပြီလား? သင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ Free Fire Melee လက်နက်လမ်းညွှန်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်​
Next articleWild Rift ရဲ့ အကြီးဆုံး Event ဖြစ်တဲ့ Sentinels of Light မှာပါဝင်ပြီး Ruination(ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်း) ကို တိုက်ထုတ်လိုက်ပါ။